Vatengi veMabhizinesi Vakasiyana! | Martech Zone
Vatengi veMabhizinesi Vakasiyana!
Chipiri, January 13, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Munyori wemifananidzo Bob Bly yakapa runyorwa rwezvikonzero nei kushambadzira kumabhizinesi kwakasiyana kwazvo nevatengi. Ndanyora nezve chinangwa mune zvakapfuura zvinyorwa, uye ndinotenda uyu muenzaniso wakanaka. Iyo chinangwa yemutengi webhizinesi yakasarudzika kana ichienzaniswa nevatengi:
Mutengi webhizinesi Anoda kutenga.
Mutengi webhizinesi akaomesesa.
Mutengi webhizinesi achaverenga yakawanda kopi.
Iyo yakawanda-nhanho nzira yekutenga.
Zvigadzirwa zvebhizinesi zvakaomesesa.
Mubhizimusi mutengi anotenga kuti kambani yake ibatsirwe? Uye yakewo.
Mr. Bly anoenda mune yakadzama tsananguro pane yega yeizvi uye anonyatso kuwedzera pane kutya uye kurudziro yemushandisi webhizinesi! Kudzivisa kushushikana kana kuomerwa, kutya izvo zvisingazivikanwe uye kutya kurasikirwa kwevaridzi mukuita zvinhu zvakakosha zvekuchengeta mupfungwa mukushambadzira nekutengesa maitiro.
Kana iwe uine maminetsi mashoma, ita shuwa kuti uverenge icho chinyorwa chose paMisiyano minomwe Pakati peB7C neB2B Vatengi, Iyo Mitemo uye Vanhu Zvakasiyana Zvakasiyana. Izvo zvinogona kukubatsira iwe kufungisisa mazano ako!
Tags: co-browserliveninjaMari Smithvakatengesa muIndanetimhanyisa wordpressIyo Nyowani Yehukama Kushambadziravideo chatvideo conference
Ndiani Akabata Mafuta Ako Anogona?
Jan 14, 2009 pa 12: 37 AM
Yakakura post - zvakare, mutengi webhizinesi anowanzo ziviswa uye zvakanyanya kukosha, mutengi webhizinesi anoshaya!
Jan 14, 2009 na2:04 PM
Vatengi vedu makambani etekinoroji eB2B chete asi tinotarisana nematambudziko pakutengesa masevhisi edu, sezvakangoita chero imwe kambani, ingave iri munzvimbo dzeB2B kana B2C. Rondedzero iyi ine mapoinzi akanakisa ekuti isu tirambe tichifunga kana isu tichinzwa kuvhiringidzika panguva yekuvandudza bhizinesi maitiro; tarisiro dzedu dzakasiyana nevatengi vega, chinhu chatinonyatsoziva asi hazvirwadze kuyeuchidzwa nguva nenguva. Ndinotarisira kuverenga chinyorwa chizere - ndatenda nekuchinongedzera.